July 2019 | RatoTara.com Websoft University
शिवालय टोलबाट प्रहरीले ठूलो परिणाममा लागू औषध सहित एक पक्राउ परे
श्याम राई-गाईघाट, साउन १५ गते । त्रियुगा नगरपालिका–११ शिवालय टोलबाट प्रहरीले ठूलो परिणाममा लागू औषध सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी ले शिवालय टोल स्थित श्याम खड्काको घरमा डेरा गरी बस्ने २३ वर्षीय मिलन खतिवडाको कोठामा मंगलबार राती छापा मारी लागू औषध बरामद गरेको हो ।
खतिवडाको कोठाबाट टीनको बाकसमा लुकाई राखेको नेट्राभेट–१० लेखीएको १६ पत्ता (१५८ वटा गोटी), क्उबकय(कउयहष्खयल(ज्ञघ पत्ता (१४४ वटा क्याप्सुल), च्भहअयँम्ँ ४ वटा बोटल नोफील १० एम्पुल, डाईभेलाव १० एम्पुल र फेनारगन १० एम्फु बरामद गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले बताए ।
त्यसैगरी नगद, आईफोन, र विभिन्न बैंकको चेक बुक समेत बरामद गरीएको छ । खतिवडा लागु औसधको कारोबारी भएको पहरीले आशंका गरेको छ । उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान शुरु गरीएको एस पि बुढा मगरले बताए ।
महिला ५ दिन देखि बेपता
श्याम राई-गाइघाट, साउन १५ गते । एक विवाहित महिला ५ दिन देखि बेपता भएकी छिन् । उदयपुरको कटारी नगरपालीका–३ च्यागाकी २४ वर्षिया उमा कार्की बेपत्ता भएको पारीवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
गर्भवतीसमेत रहेकी कार्की साउन १० गते दिउसो २ बजे औषधि किन्न घर देखी हिडेदेखी अझ सम्म नर्फीएको प्रहरीले जनाएको छ । आफन्त र गाउलेहरुले उनी हराए देखी नै खोज तलास गर्दा समेत नभेटेपछि प्रहरीमा हराएको उजुरी दिएका छन् ।
एक वर्ष अघि विवाह भएको महिलाको श्रीमान बैदेशिक रोजगारको सिलशिलामा अहिले साउदी अरवमा रहेका छन् । महिला हराएको उजुरी परेपछी अनुगमन शुरु गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपि नर बहादुर बुढा मगरले बताए ।
नदी प्रणालीको नक्सांकन गर्न सरकारलाई सुझाव
काठमाण्डौ साउन १५ गते । रातो तारा डट कम,नदिजन्य सामाग्री उत्खनन्बाट वातावरणिय प्रभावलाई कम गर्र्न नदी प्रणालीको नक्सांकन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
नदीनालामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगाएतका निर्माण सामाग्री जथाभावी निकाल्दा वातावरणिय असर बढ्दै गएकाले नदिजन्य प्रणालीको नक्सांकन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन विज्ञ दिलिप सडौलाले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म कुन नदीको क्षमता कति छ ? कति वर्षमा नदिजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन नगरी बालुवा, गिट्टी लगाएतका पदार्थ उत्खनन् गर्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
नदिजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् गर्दा नदीको छेउमा भएका बस्तीको जोखिम बढ्दै गएको छ भने वातावरणमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
आज खीर खाने दिन–डिडिसि लगाएत प्याकिंग र खुल्ला प्याकिंगका दुध सबै मिसावट युक्त खिर खादा होसियार
बिराटनगर साउन १५ गते । रातो तारा डट कम,आज साउन १५ गते, खीर खाने दिन । वषात्ले थकित भएको शरीरलाई ऊर्जामय बनाउन खीर खाने नेपाली परम्परा छ । असार १५ का दिन दही चिउरा खाएर शरीरलाई ऊर्जामय बनाउने र साउन १५ मा तात्तातो मसलेदार खीर खाएर शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने यो पुरानो चलन र नेपाली संस्कार हो ।
मरिच, दाख, सुकेको नरिवल, दालचिनी, दाख राखेर तयार गरिएको खीर यो मौसमका लागि उपयुक्त भोजन रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर आज भोलि पाइने डिडिसि अन्य डेरीका दुध पोकाका खुल्ला प्याकिंगका दुध सबै हानिकारक केमिकल मिसावट गरी उत्पादन गरीएको भए पनि सरकारले नहेर्दा खान योग्य भने नभएको बिज्ञहरुको भनाइरहेकाले धेरै चै खिर नखान आग्रह गरिएकोछ ।
वन्दले जनजीवन प्रभावित,संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
काठमाण्डौ साउन १५ गते । रातो तारा डट कम,विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको बन्दका कारण देशका विभिन्न जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज माइला लामालाई पक्राउ गरिएको विरोधमा बन्दसहित संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विकले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्रोही नेकपाले लामा सहित सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताको विना सर्त रिहाइको माग गरेको छ ।
सुन्दरहरैचाका सडकका रुख काट्नेलाई कार्वाही हुने
शिव भट्टराई मोरङ। रातो तारा डट कम,सुन्दरहरैचा, सुन्दरहरैचा नगरपालिका पुर्व पश्चिम लोकमार्गको सडकमा केही महिना अघी प्रदेश सरकारको सडक सुशासन अन्तर्गत रहेर सडकका रुखहरु काट्ने कार्य गरिएको थियो ।
८२ फुट सडक क्लियर गर्ने नाममा सुन्दरहरैचाका विभिन्न स्थानमा उपभोक्ता समिती बनाई रुख काटिएको थियो । तर चौतर्फी विरोध हुँदै गर्दा यती खेर उक्त सडकमा अख्तियार समेत लागेको छ । एका तर्फ अख्तियारले उक्त सडक छानविन गर्दैछ भने एका तर्फ सडक विभागले उक्त रुख काट्ने उपभोक्ता समितिलाई जनही रु २००० विगो तिराई कार्वाही गर्ने बताएको छ ।
२ महिना नबित्दै भत्किएको सडकको अनुगमन गर्न आइपुगेका सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख शुभराज न्यौपानेले विगतको रुख काटेको बिषय जोड्दै ति सबै उपभोक्ता समितिलाई कार्वाही गरिने बताएका हुन ।
उनले सडकको हरेक काम गर्दा स्थानिय तहले सडक विभाग सग अनुमती लिएर मात्र गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ तर कतिपय स्थानिय तहले आफु खुशी काम गर्दा समेत विकासका काम त्यती भने जस्तो नभएको बताए ।
इटहरीमा कपड़ा संकलन तथा नि : शुल्क बितरण अभियान सुरु
शिव भट्टराई,रातो तारा डट कम,इटहरी-कपडाको पहूँच नहुनेहरुलाई सहजरुपमा कपडा उपलब्ध गराउने उद्धेस्यले सुनसरीको इटहरीमा कपडा संकलन तथा निशल्क वितरण अभियान सुरु भएको छ ।
विपन्न समुदायका मानिसहरुलाई कपडा उपलब्ध गराउने उद्धेस्यले भरत श्रेष्ठ लगायतले सहयागी भित्ता नाम दिएर अभियान सुरु गरेका हुन ।इटहरीको रेयुकाई चौतारीमा स्टल राखेर कपडा वितरण गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको अभियान ब्यावहारीक रुपमा सामाजिक अभियानमा इटहरी क्षेत्रका कपडाका होलसेल विक्रेताहरुले समेत कपडा सहयोग गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।
स्टलमा जम्मा भएका कपडाहरु आवस्यक हुनेहरुले निशुल्क लान सक्ने गरी ब्यवस्था मिलाईएको सााथै आगामी दिनमा इटहरुका ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेर विपन्नहरुलाई कपडा वितरण गरीने अभियान्ता दिनेस कोइरालाले जानकारी दिए ।
अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा अतिथीहरुले यस प्रकारको अभियानले समाजमा आपसी सद्भाव वढाउन मद्धत पुग्ने विस्वास ब्यक्त गरे।
नगद चोरी गर्ने पक्राउ
मोरङ, श्रावण-१३ गते । रातो तारा डट कम,नगद चोरी गरी फरार रहेका मोरङ कटहरी गाँउपालिका १ बस्ने २० बर्षीय सुरज कामत पक्राउ परेका छन । साउन ७ गते कामतले बिराटनगर १ बस्ने मोतीराज दाहालको घरबाट नगद १३ लाख ५० हजार रुपैया चोरी गरी फरार रहेका थिए ।
फरार रहेका कामतलाई हिजो बिराटनगर १ स्थितबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । पक्राउ परेका कामतको साथबाट नगद ३ लाख ८१ हजार रुपैया र १ लाख ५ हजार पर्ने १ थान SAMSUNG मोबाईल समेत बरामद गरिएको साथै उनि उपर थप अनुसन्धान भईरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
बम बिस्फोटमा परि घाइते भएकाको मृत्यु
काठमाडौ साउन १३ गते । रातो तारा डट कम,काठमाण्डौंको सुकेधारामा जेठ १२ गतेको बम विस्फोटमा परी गम्भिर घाइते भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता रामकुमार श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ ।
सुकेधारामा भएको बम विस्फोटमा परी रामेछाप मन्थली ४ का श्रेष्ठ गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा तीन सातादेखि श्रेष्ठको उपचार भइरहेको थियो । राजधानीका दुई घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुगेकोछ ।
आइसियुमा उपचाररत श्रेष्ठलाई अक्सिजन दिएर राखिएको थियो । जेठ १२ मा उपत्यकाका सुकेधारा र घट्टेकुलोमा भएको विस्फोटमा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
जेठ १३ मा घोषित बन्दलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको विस्फोटमा सोही पार्टीका कार्यकर्ता कालीकोटका दीपक विक, दाङका गोकुल रानामगर, निरन्तर मल्ल र सिटिइभिटीमा अध्ययनरत प्रज्वल शाहीको मृत्यु भएको थियो ।
पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर १ बालकको को मृत्यु ।
तेह्रथुम,श्रावण-१२ गते । रातो तारा डट कम,तेह्रथुम छथर गाउँपालिका-३ पन्चकन्या बस्ने १० बर्षिय बादल बि.क. को पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको छ ।
हिजो अपरान्ह सँबा ५ बजे घर नजिकै रहेको सार्बजनिक पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बि.क.को मृत्यु भएको भनि स्थानीयले राती पउने ९ बजे प्रहरी चौकी शुक्रबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
घटनाको जानकारी पाउनसाथ प्रहरी टोली खटि गई घटनास्थलको कानुनी प्रकृया पुरा गरी अन्य थप अनुसन्धान भईरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
देशैभरी बाल पोषण अनुदान कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको तयारी
काठमाण्डौ साउन ११ गते । रातो तारा डट कम,सरकारले गरिबीको सुचकाङ्कमा रहेका जिल्लालाई लक्षित गर्दै बाल पोषण अनुदान कार्यक्रम देशैभरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । विपन्न, दलित समुदायका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन भैरहेको यो कार्यक्रम अबका दिनमा प्रदेश २ र पाँचका जिल्लाहरुमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले जुुम्ला, हुुम्ला, मुुगु, कालिकोट, डोल्पा, अछाम, बझाङ्, बाजुरा तथा रौतहटमा यो कार्यक्रम चलिरहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकृत दिपक झाले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रम देशैभरी सञ्चालन गर्ने तयारी भएपनि यसको गृहकार्य भने भैरहेको उहाँको भनाई छ ।
आफ्नो वडामा गएर बच्चाको जन्मदर्ता र खोप कार्ड देखाएपछि यो सुबिधा पाइन्छ । कार्यक्रम अन्तरगत बालबालिकालाई प्रतिव्यक्ति मासिक चारसय रुपैयाँ वितरण गर्ने गरिएको छ । बालबालिकालाइ अण्डा, फलफूल तथा सागसब्जी खुवाउन सजिलो होस् भनेर सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । बालबालिकामा हुने कुपोषणको दर घटाउन यो कार्यक्रम ल्याएको सरकारको भनाई छ ।
७०औं आज नेपालमा हलोक्रान्ति दिवस मनाइदै,
काठमाण्डौ साउन ११ गते । रातो तारा डट कम,७०औं आज नेपालमा हलोक्रान्ति दिवस मनाइदैछ । देशमा प्रजातन्त्रको उदय हुनुअघि वि.सं, २००६ साल साउन ११ गते आजकै दिन लमजुङको दुराडाँडा–६ अर्चल्यानीको बाटेगरामा बाहुनहरुले सामुहिकरुपमा हलो जोतेका थिए । ब्राह्मणबाद तथा जातीय भेदभावसँगै हलीप्रथा अन्त्यको लागि पंण्डित तोयानाथ अधिकारीको अगुवाइमा लेफ्टिनेन्ट शेषकान्त अधिकारी, मुखिया हरिभक्त पौडेल, मायानाथ पौडेल, श्रीकान्त अधिकारी लगायत २७ जना बाहुनले नेपालमै पहिलो पटक हलो जोतेका
थिए । त्यही दिनको सम्झनामा आजको दिनलाई हलोक्रान्ति दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
आईसीसी टी–ट्वान्टी क्रिकेट खेल कुवेत र नेपाल विरुद्धको खेल जारी
काठमाण्डौ साउन ११ गते । रातो तारा डट कम,आईसीसी टी–ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गत एसिया फाईनलमा कुवेतविरुद्वको खेलमा नेपालले फिल्डिङ गरिरहेको छ । सिंगापुरको ईन्डियन एसोसियसन क्रिकेट मैदानमा केहिबेर अघि सुरु भएको खेलमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको हो ।
यो खबर तयार पार्दासम्म कुवेतले १५ ओभर खेल्दै ७ विकेट गुमाएर ९६ रन बनाएको छ । अघिल्ला दुई खेलमा एक जित र एक हार व्यहोरेको नेपालको लागि कुवेतविरुद्धको खेल महत्वपूर्ण रहेको छ । किनकी विश्वकप छनोटको ग्लोबल छनोटमा पुग्न नेपाललाई बाँकी दुई खेलमा स्पष्ट जितको आवश्यकता रहेको छ ।
पहिलो खेलमा अप्रत्यासित रुपमा कतारसँग ४ विकेटले पराजित नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसियालाई ७ विकेटले हराएको थियो । त्यसैले छनोटको शीर्ष स्थानमा रहँदै ग्लोबल छनोटमा पुग्न नेपाललाई दुई खेल नै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
गायिका संगीता रायमाझीको ‘चोलीको तुनाले’ बोलको तीज गीत सार्वजनिक
बिराटनगर । रातो तारा डट कम,नेपाली महिलाहरुको महान पर्व तिज नजिकिदैं जाँदा बजारमा हरेक दिन दिनहुँ दर्जनौँ तीजका गीतहरू सार्वजनिक भैरहेका छन्।
यसैबिचमा नेपाली सांगितक क्षेत्रमा सम्भावना बोकेकी गायिका संगीता रायमाझीले ‘चोलीको तुनाले’ बोलको तीज गीत बजारमा ल्याएकी छिन् । जर्सिन्द्र श्रीर्पालीको शब्दमा संगिताले आफ्नो स्वर र संगित भरेकी छन् ।
गितको भिडियोमा मोडल रितिका जिरेलसंगै गायिका रायमाझीले कम्मर मर्काएकी छन् । भिडियो निर्देशन उनी आफैले गरेकी हुन्।
गायिका रायमाझीले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरेको गितको भिडियोकोे छायांकन दुर्गा वान्तावा र सम्पादन नहकुल खड्काले गरेका हुन् ।
कीर्ते हस्ताक्षर गर्ने ककनीका कर्णबहादुर तामाङ पक्राउ
मनोज भट्टराई ओखलढुंगा-ओखलढुंगामा गैरकानुनी रुपमा स्थानीय सरकारको काम गर्ने एक व्यक्ती पक्राउ परेका छन् । निर्वाचित वडा सदस्यको नाममा कार्यबहाक अध्यक्ष उल्लेख गरी कीर्ते हस्ताक्षर गरेर काम गर्ने सुनकोशी गाउँपालिका ९ ककनीका कर्णबहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन् ।
बुधबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका उनलाई बिहीबार जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका डिएसपी पुष्पराज मल्लले जानकारी दिए । उनीविरुद्ध सरकारी कागजात कीर्ते सम्वन्धि मुद्दा चलाइएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै प्रहरीले सबै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा सदस्यका उमेदवार थिए । निर्वाचनमा पराजित भएपनि उनले वडा कार्यालयले दिने सबैजसो सिफारीससहितका कागजातहरुमा हस्ताक्षर गरेर दिने गरेका थिए । उनले सुनकोसी गाउँपालिका ९ को छाप, लेटरप्याड, मालपोत रसिद लगायतका सबै सरकारी कागजात कीर्ते गरेर स्थानीयसँग अवैद्य रुपले सेवा शुल्क भन्दै रकम असुल्ने गरेका थिए ।
तामाङले सर्जिमन मुचुलका, वडा कार्यालयका विभिन्न निर्णय भएको भनि फर्जि सिफारिस लगायत काम समेत गरेको पाइएको छ । ती सबै कागजातहरुमा कार्यावाहक वडाध्यक्ष भनेर धनबहादुर तामाङ र टंकबहादुर कटवालको नाम उल्लेख गरिएको छ । तामाङ र कटवाल दुवै उक्त वडाका वडा सदस्य हुन् । कीर्ते कागजातबाट मालपोतमा जग्गा कारोबार भइरहेको सुचना पाएपछि स्थानीयले वडा र प्रहरीमा खबर गरेका थिए । उनीहरुको नाममा कीर्ते काम गरेको भेटिएपछि दुवै वडा सदस्यले आफ्नो नाममा कीर्ते भएको भन्दै वडा कार्यालय मार्फत प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी दिएर छानबिनका लागि आग्रह गरेका थिए ।
यसअघि सोही मुद्दामा स्थानीय ४४ वर्षीय पञ्चबहादुर तामाङ र अम्बरबहादुर तामाङ पक्राउ परिसकेका छन् । कर्णबहादुरको अगुवाइमा सबै कागजात कीर्ते गरेर १ जेठ २०७६ मा अम्बरबहादुर तामाङको नाममा जग्गा पास भइसकेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पञ्चबहादुर तामाङले जग्गा कारोबार गर्न मालपोत पुगेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गाको समेत कारोबार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेपछि मुख्य अभियुक्त कर्णबहादुर तामाङ फरार रहेका थिए । पक्राउ परेका अन्य व्यक्तिहरूले समेत सबै कागजात कर्णबहादुरले मिलाएको बयान प्रहरी समक्ष दिएका छन् । जग्गा पास गर्न ३५ दिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेर काम गरेको पाइएको छ ।
कीर्ते कागजातका आधारमा जग्गा पास गर्ने मालपोत कार्यालय र लेखापढी व्यवसायीको समेत संलग्नता रहेको भन्दै स्थानीयले उनीहरुमाथि पनि छानविन गर्न माग गरेका छन् । कीर्ते सूचनाका आधारमा कार्यालयले सबै कागजातसमेत कीर्ते नै राखेर जग्गा रजिस्ट्रेसन गरी लालपुर्जा समेत जारी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
मुद्दा अनुसन्धानमा रहेको भन्दै प्रहरीले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन् । मुद्दामा प्रतिवादी रहेका पञ्चबहादुर ९ नं. वडा कार्यालयको छाप, लेटरप्याड, मालपोत रसिद, सर्जिमन मुचुल्का लगायतका कागजात कीर्ते गरेर जग्गा नामसारीका लागि मालपोत कार्यालयमा पेश गर्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए ।
छाप, मालपोत रसिद, सर्जिमन मुचुल्का तथा हस्ताक्षर कीर्ते गरेर जिल्ला मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाबाट अनाधिकृत व्यक्तिका नाममा जग्गा नामसारी गरेको पाइएको वडा नं. ९ अध्यक्ष झनक कार्कीले बताए । ‘यहाँको निर्वाचित वडा अध्यक्ष म हुँ । मैले वडा सदस्यहरुलाई कार्यबहाक छाडेको छैन तर कार्यबहाक भन्दै हस्ताक्षर गरेर काम गरेको भेटियो ।’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘कसैलाई थाह नदिई केही व्यक्तिले वडा कार्यालय नै खडा गरेर साथीहरुले काम गर्नुभएको रहेछ यो गतल भयो ।’ शुसासनको अभ्यास गरिरहेको वडामा भएको गैरकानुनी कामले गलत सन्देश दिएको उनको तर्क छ ।
सुनकोशीको ककनी गाउँमा तामाङ समुदायको बाहुल्यता छ । चेतना र आर्थिक स्थित कमजोर भएको गाउँका स्थानीयसँग नक्कली मालपोत रसिद बनाएर कर उठाउनेदेखि नागरिकताको सिफारीस र मुचुल्का तयारीसम्मका काममा व्यक्तीहरु सकृय भएको खुलेको छ।
ज्येष्ठ नगरिकको दायित्व पूर्णरुपमा सरकारले नै लिनुपर्ने
काठमाण्डौ साउन १o गते । रातो तारा डट कम,प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिका सदस्यहरुले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार नभएका ज्येष्ठ नगरिकको दायित्व पूर्णरुपमा सरकारले नै लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले आयस्रोत कम हुने परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पर्याप्त सम्पत्ति भएर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरु छोरा–छोरीबाट उपेक्षित भएका उदाहरण धेरै रहेको भन्दै राज्य नै उनीहरुको संरक्षक बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
समितिका अरु सदस्यहरुले निजामती कर्मचारी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रबाट पनि आम्दानीको केही हिस्सा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा तयार पार्न लागिएको विधेयकमा दन्ड, सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था पनि समावेश हुनुपर्ने र पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राख्दै कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
हत्या गरी फरार रहेका एक युवा पक्राउ
श्याम राई उदयपुर संवाददाता-गाईघाट साउन,१० गते ।
रातो तारा डट कम,६ वर्ष अघि एक व्यक्तिको हत्या गरी फरार रहेका एक युवा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले लामो समयपछि त्रियुगा नगरपालिका वडा नं ५ बस्ने ३३ वर्षिय होम बहादुर कार्कीलाई लालपत्ता प्रहरी पोष्ट नजिकबाट दिउसो पक्राउ गरेको हो ।
२०७३ मंसीर २४ गते उनले आफ्नै छिमेकी ३५ वर्षिय मोहन बुढाथोकीलाई बंचरो प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । हत्या गरे लगत्तै उनी भागेर मलेसिया पुगेका थिए । मलेसिया रहेकै बेला प्रहरीले उनी विरुद्ध २०७५ पौष २ गते रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो ।
केही दिन अघि मात्र उनी मलेसियाबाट नेपाल फर्केका थिए । प्रहरीले उनी नेपाल आएको सुचना पाएपश्चात उनी माथी निगरानी बढाएर पक्राउ गर्न सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी प्रमुख एस.पी. बीर बहादुर बुडामगरले बताए ।
हामीले धेरै मेहनत गरेर कार्कीलाई पक्राउ गर्न सफल भयौँ ।ु एस.पी. बुढामगरले भने । हामीले नेपाल आएदेखि नै उनलाई निगरानी गरीरहेका थियौ । लालपत्ता आएको जानकारी पाउन साथ पक्राउ ग¥यौँ ।ु उनले भने ।
सुन्दरहरैचाको ठडियामा लगातारको पानीले बाटो बगाउँदा स्थानीयवासी समस्यामा
शिव भट्टराई,मोरङ । रातो तारा डट कम,वर्षापछिको पानी एकै ठाउँबाट निकास हुँदा मोरङको सुन्दरहरैंचा– ७ मा रहेको एउटा कच्ची बाटो बाढीले बगाएकोले सुन्दरहरैचा-७ वासी निकै समस्यामा परेका छन्।
गोठगाउँबाट ठडिया आधारभूत स्कुल छेउमा जोडिने कच्ची बाटो मध्याली मार्गको कल्भर्टसँगै बाटो पनि बाढीले बगाउँदा आवागमन अवरुद्ध भएको स्थानीय नवीन रिजालले बताए । गोठगाउँ चोकभन्दा करीब ६ सय मिटर दक्षिणको सो स्थानमा तत्कालको लागि तारजाली लगाएर कटान रोक्न सके थप क्षति नहुने भनी स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराइएको रिजालले बताए ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतिरको पानीको निकास जाने ठाउँ धेरै नहुँदा र एकै स्थानबाट पानी निकास हुँदा कल्भर्टसहित बाटो बगेको स्थानीयले बताए । बाटोको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदा पनि वडा कार्यालय र नगरपालिकाले चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन् ।
वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद सिटौला लगातारको अविरल वर्षाको पर्याप्त निकास नहुँदा समस्या आएको बताउँछन् । तत्कालको लागि पानी निकासका पैनी र कल्भर्ट सफाइ गरिने उनले बताए । वडा नम्बर ७ को गोठगाउँ चोकबाट ठडिया जाने पैनीको आजै सफाइ गरिने अध्यक्ष सिटौलाले बताए ।
सिटौलाका अनुसार गछिया खोलाको बाढीका कारण वडा नम्बर ७ मा ३० घर जोखिममा परेका छन् । ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पश्चिमतर्फ खोला किनारमा रहेका ३० परिवार जोखिममा परेका छन्,’ वडाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘त्यहाँ बिहानैदेखि जेसिबी लगाएर तटबन्धको काम भइरहेको छ ।’
सिटौलाका अनुसार गछिया खोलाका कारण गछिया बजारमा पनि केही जोखिम बढेको छ । होचा र पानीको निकास नभएका धेरै ठाउँमा डुबानको समस्या देखिएको उनले बताए ।
सीमा क्षेत्र तनावग्रस्त -एकको मृत्युु
मोरङ । साउन ९ गते । रातो तारा डट कम,विराटनगर भन्सार कार्यालय अगाडी भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकेर आएको लहरीले घिसारेर एक यूवाको आज मृत्यु भएपछि सीमा क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–१५ रानीका २२ वर्षीय अमर सिंहको मृत्यु भएपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो ।
ठक्कर दिने लहरी-एन एल ०१ डी ३६९० नम्बरको लहरीले बीआर ३८ आर ३२१३ नम्बरको मोटरसाइकललाइ ठक्कर दिएको थियो । मोटरसाइकल चालक सिंहलाई करिब २ सय मिटर लहरीले घिसारेर मारेकोे प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएकाछन् । लहरीले ठक्करबाट सिंहको मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार खिउजुले बताए ।
मोटरसाइकलले ओभेरटेक गर्ने क्रममा कर्कटपाता बनाउने कच्चा पदार्थ बोकेको लहरीले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको डिएसपी खिउजुले बताए । शव पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल विराटनगर ल्याइएको छ । दुर्घटनापछि लहरीका चालक भने फरार छन् । उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको विरोधमा प्रदर्शन र तोडफोड हुन थालेपछि रानी बसपार्क क्षेत्रको अवस्था असामान्य बनेको छ ।
घटनाको विरोधमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दाले दुर्घटना गराउने लहरीसहित कम्तीमा १३ वटा मालबहाक सवारी साधनमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ । भन्सार कार्यालय नजिकैको सडकमा टायर बालेर अहिले प्रदर्शन भइरहेको छ ।
नक्कली सवारी चालक अनुमतीपत्र विक्री गर्ने एक जना पक्राउ
काठमाण्डौ साउन ९ गते । रातो तारा डट कम,बारामा नक्कली सवारी चालक अनुमतीपत्र बनाएर बिक्री गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बाराकै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का ३१ वर्षका दीपक अर्याल रहेका प्रहरीले जनाएकोछ । स्थानीयलाई झुक्याएर ‘स्मार्ट लाईसेन्स’ बिक्री गरेको पाएपछि उनलाई बाराको जीतपुर बजारबाट नियन्त्रणमा लिईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवक्ता रञ्जितसिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो । ‘अर्यालले ‘हेबी’ सवारी चाकलसँग प्रतिब्यक्ति ५० हजार र ‘लाईट’ सवारी चालकसँग प्रतिब्यक्ति १० हजार रुपायाँ लिएर स्थानीय १० देखि १२ जनालाई ठगी गरेको पाइएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको उहाँले बताउनुभयो । पाँच थान नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी चालक अनुमती पत्र लिन बुझाएको रसिद भरपाईसहित पक्राउ परेका उनीबिरुद्ध लिखत कीर्ते अभियोगको मुद्दा दर्ता गरिएकोछ ।
सरकारले अव ९८९ अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने
काठमाण्डौ साउन ९ गते । रातो तारा डट कम,सरकारले तीनवटा मन्त्रालयमा कर्मचारी भर्ना गर्न राजपत्राङ्कित श्रेणीका अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । गएको साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय माताहतका आयोजना सञ्चालन गर्न अस्थायी दरवन्दी खुलाएको हो । अव सरकारले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत दुइ सय १३ जना, बन मन्त्रालय अन्तर्गत ५० र श्रम मन्त्रालयअन्र्तगत सात सय २६ जना अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
जमिनदारको जमिनमा भु-माफिया नक्कली मोहिको आँखा, सरकारले नहेर्दा बिवाद चुलिदै,
बिराटनगर । रातो तारा डट कम,रंगेलीको आमतोला तान्सेन शर्माका नाममा तीन सय बिगाहा जमिन रहेको तर हदबन्दीमा परेकाले सो जग्गा सरकारले छिटो लिएर जग्गा धनिले कतिपाउने हुन छुट्याइ दिन सरकार संग तान्सेनका छोरा बिनोद शर्माले बिराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माग गरेका छन।
कहिले रगेली मेयरले जग्गा हडपेको खवर आउँछ त कहिले नक्कली मोहि र भु माफिया धमक्याउदै जमिन, जमिन्दार सन्जय शर्मालाई माग गर्ने दुखदिने गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन ।
बिवाद-रंगेली नगरपालिकाको न्यायिक समितिले दुई बिगाहामा मोहियानी भएकालाई गलत नियत राखेर ९ बिगाहा जोत्नपाउने निर्णय सुनाए पछि बिवाद चुलिएको वताइन्छ।
आकाशबाट खस्यो १० किलोको अचम्मको ढुंगा,हेर्नेको घुइंचो।
काठमाडौँ । रातो तारा डट कम,सीमावर्ती क्षेत्र भारत विहारको मधुवनीमा ‘असामान्य’ लाग्ने एउटा ढुंगा आकाशबाट खसेको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।
त्यस क्षेत्रमा आकाशबाट करिब १० किलोको ढुंगा खसेपछि हेर्नेहरूको भीड लागेको छ। मधुवनी जिल्लाअन्तर्गत लौकहीको कौरियाही ककहिया बधारमा खसेको सो ढुंगा हेर्न सरकारी अधिकारीहरु पनि पुगेका छन् । सो ढुंगामा चुम्बकीय शक्ति रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ढुंगामा चुम्बक लगाउँदा त्यसमा टाासिने प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् ।
हिन्दूस्तान दैनिकका स्थानीय संवाददाता रोशन कुमारले सोमबार नेपाली समयअनुसार मध्यान्ह १२ बजेर १५ मिनेटमा ढुंगा खसेको बताए । ढुंगा खस्दा ठूलो आवाजसँगै धुँवा पनि देखिएको थियो ।
खेतमा काम गर्ने मजदूरहरु डरले भागेका थिए । धुवाँ बन्द भएपछि श्रवण यादव नाउँका एक मजदूरले आकाशबाट खसेको वस्तु ढुंगा भएको थाहा पाए ।
अहिले सो ढुंगालाई प्रहरीले राखेको छ । मधुवन्नीका डिएम कपिल अशोकले ढुंगा अहिले प्रहरीसँग रहेको र छिट्टै सम्बन्धित विशेषज्ञकहाँ पुर्याइने जानकारी दिए ।
जीवनमा यस्तो ढुंगा आफूले कहिले नदेखेको महराज महेश ठाकुर कलेज दरभंगाका प्राध्यापक चन्द्रमोहन झा पडवाले बताए । ढुंगा खसेको जानकारी पाउनसाथ आफू ढुंगा रहेको क्षेत्रमा गएको उनले बताए ।
साभार एभरेस्ट पाटी
तास खेल्दै गरेका ६ जना पक्राउ
सुनसरी साउन ८ गते । रातो तारा डट कम,सुनसरीको ईटहरी उपमहानगरपालिका(२ स्थित हलगढामा रहेको सुर्यदय होटलबाट तास खेल्दै गरेका ६ जनालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरीले पक्राउ गरेको छ ।
होटलमा पैसाको बाजी थापी अवैध जुवा तास भई रहेको भन्ने गोप्य सुचनाको आधारमा खटिएको प्रहरीको टोलिले सुनसरीको ईटहरी उपमहानगरपालिका २ बस्ने वर्ष ४८ को डोमी चौधरी, वर्ष ४५ को झलक बहादुर कार्की, वर्ष ३७ को अनिल तामाङ, वर्ष ५८ को गोपाल निरौला, सोही उपमहानगरपालिका ४ बस्ने वर्ष ३६ को बिदुर मिश्र र सोही उपमहानगरपालिका ५ बस्ने वर्ष २६ को मुकुन्द काफ्ले समेतलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले तास खेलेको ठाउबाट ३५ हजार ८ सय ८० नगद, क्याल्कुलेटर, तास १६२ पत्ती बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका ६ जनालाई नै ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरीमा राखि थप अनुसन्धान भईरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
राजनिती भर्ति केन्द्र बनाउदा गोप पनि अब चै ओरालो लागेछ
बिराटनगर साउन ७ गते । रातो तारा डट कम,काठमाडौ बाट कुनै पत्र पत्रिका कतिखेर आउँछ भनेर मानिस रूगेर बसिरहन्थे तर आज समय अर्कै पो भएछ। अनलाइनले खाएछ कि के हो।
गोपमा सरकारले राजनिती भर्ती केन्द्र बनाए पछि डुब नैपो थालेछ। बिराटनगरमा आज ४ बजे तिर आजै ७ गतेको गोप सटिङ गरिहेको देखेर कुरा गर्दा-बिराटनगरमा गोप कति आउँछ थाहाछ भन्न लाजैलसग्छ भन्दिन । चित्र हेरेर .......
कार्यलयमा दुई हाकि कर्मचारी काम के ???? प्रश्न जे होस अनलाइन ले पत्रपत्रिका खाएछ भन्न सकिन्छ ।
बिराटनगरमा२५ पत्रपत्रिका पसल मध्ये अब ४ मात्र छन रे तर
कान्तिपुर गोप जस्ता पत्रिका जसरि ल्याइदियो त्यसरिनै बेलुका हटाउनुपर्छ रे । पत्रि बिकनै छोडो रे । हो कि होइन थाहा छैन।
महिला साफ फुटबलको उपविजेता बनेको नेपाली खेलाडी लाई प्रदेश सरकारले गर्यो सम्मान
विराटनगर साउन ७ गते । रातो तारा डट कम, पाँचौ संस्करणको महिला साफ फुटबलको उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई १ नम्बर प्रदेश सरकारले नगदसहित सम्मान गरेको छ । फागुन २८ देखि चैत ८ सम्म विराटनगरको सहिद मैदानमा भएको पाँचौं महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय टिम उपविजेता भएको थियो ।
विराटनगरमा मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रदेश सरकारले साफ उपविजेता टोलीलाई जनही १÷१ लाख रुपैयाँ नगदले सम्मानित गरेको हो । सम्मानित हुनेमा २० खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियल रहेका छन् ।
सम्मानित हुने खेलाडीहरूलाई प्रमाण पत्र र नगदसहित प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सम्मान गरेका थिए । सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री राईले खेलकुद क्षेत्रलाई प्रदेशसरकारले उच्च प्राथामिकता राखेर अगाडी बढेकोबताए।
अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ ले खेलकदु क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट बिनायोजन गरेको जानकारी दिदै उनले फुटबलको माध्यमबाट खेल क्षेत्रको विकास गरेर अगाडी बढने बताए
बोडिङ स्कुलमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
मोरङ साउन ७ गते । रातो तारा डट कम,विराटनगरस्थित ग्रेडेड बोडिङ स्कूलमा निःशुल्क आँखा र कानको स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ । स्कूल परिसरमा मंगलबार स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको स्कूलले जनाएके छ ।
विराटनगर आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा भएको शिविरमा ग्रेडेड स्कूलका ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थीले आँखा र कानको परिक्षण गरेका थिए ।
स्कूलले सोमबार पनि स्कूल परिसरमा निःशुल्क दत्त परिक्षण शिविर आयोजना गरेको थियो । उक्त शिवरमा २ सय बढीले दातको परिक्षण गराएका स्कूलले जनाएको छ
छानविन समितीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन
गोपाल काफ्ले -मोरङ साउन ७ गते । रातो तारा डट कम पथरी र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका आर्किटेक इन्जिनियर अरुण क्षेत्री घिमिरेलाई लागेको आरोप प्रति सत्यतथ्य छानविन समिती गठन भएको ७ महिना बित्दापनि छानविन समितिको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
आर्किटेक इन्जिनियर क्षेत्री बिरुद्ध २०७५ मंसिर २५ गते सेवाग्राहिले काममा ढिलाई, सेवाग्राहीको घरनक्सा पासको धरैती फिर्ता गर्न आलटाल र विभिन्न कन्सल्टेन्सी मार्फतको काममा ठिलासुस्ती गरेको भन्दै पत्रकार संमेलन गरेका थिए । इन्जिनियर क्षेत्रिले कार्यलयमा आफ्नो कर्मचारी राख्दै सेवाग्राही र कन्सल्टेन्सीलाई दुख दिएको भन्दै छानबिन गरि कारवाहिगरि पाउँ भनि हस्ताक्षर सहित नगर प्रमुखलाई उजुरी नै गरेका थिए ।
क्षेत्रिको कार्यसैली बिरुद्ध नगरका सबै कर्मचारीले पेन डाउन समेत गरेका थिए । एल जि सि डी मार्फत पथरीशनिश्चरे नगरमा जागिर खाएका क्षेत्रिको कार्यअवधी सकिए पछि नगरले जागिर नथपे पछि जागिर छोड्नु परेको थियो ।
जनप्रतिनिधी आए पछि उनि पुर्ण जागिरमा आए तर उनको कार्यसैली ठिक नभएको भन्दै कल्सेन्टेन्सीहरुले प्रसासनीक कार्यकारी अधिकृत पुरुश्वतम घिमिरेले र प्रशासकीय अधिकृत सुर्यप्रसाद गौतमलाई दुई पटक नगरमा निबेदन दिइसकेका छन । तर नगर भने उक्त विषयमा आधिकारीक प्रमाणहरु नभएको भन्दै पन्छीने गरेको छ । जस्ले गर्दा आरोप लागेका क्षेत्रि दोसि हुन वा निर्दोश हुन सफाई भएको छैन् ।